शरद ऋतु को शुरुवात vacationers लाभ को धेरै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। गर्मी गर्मी अझै पनि साथै फ्रान्स को दक्षिण मा, स्पेन र इटाली समुद्र तटों मा शासनकालमै। Crimea मा, मखमल सिजन सुरु ... रोक्नुहोस्! माथिको स्थानहरू सबै टाढा र छन् नजिकै विदेश। Crimea मा, तथापि, तपाईं, रूसी संघ को नागरिक को मात्र आन्तरिक पासपोर्ट भइरहेको जान सक्नुहुन्छ। तर हामी लागत घरेलू पर्यटन क्षेत्र विकास गर्न जो कि समयमा Patriots हो र हामी चाहनुहुन्छ भने, रूस मा सेप्टेम्बर मा आराम गर्न कहाँ जाने हो? यो प्रश्न यति सरल छैन। हामीलाई जवाफ पाउन प्रयास गरौं।
हाम्रो देश विशाल छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो छुट्टी रमाइलो र सहज खर्च गर्न सक्छन् ठाउँ सधैं त्यहाँ छ। टाढाको उत्तर मा यो पहिले नै जाडो को शुरुवात हो, र दक्षिण मा - गर्मी को अन्त। तपाईं एक समुद्र तट बिना आफ्नो छुट्टी कल्पना छैन भने, यो सेप्टेम्बर मा समुद्र जान सम्भव छ। रूस गर्मी महिनामा एक पर्यटक उछाल अनुभव गरिरहेको छ। प्रारम्भिक शरद ऋतु मा, तपाईं कम आवास मूल्य, फल प्रशस्त, दक्षिण सडक unloaded पाउनेछन्।
Azov समुद्र तट मात्र सेप्टेम्बर को पहिलो आधा मा एक आरामदायक रहन को लागि उपयुक्त छ। त्यसपछि बलियो हावा सुरु, र progrevshayasya गर्न +25 डिग्री पानी गर्मी गर्मी राख्छ, रवि एक एकांत ठाउँमा फेला पार्न हुनेछ। तर Azov समुद्रको रूस मा सेप्टेम्बर मा बाँकी - सम्पूर्ण परिवारको लागि सबै भन्दा राम्रो बजेट विकल्प। त्यहाँ बलौटे समुद्री तट र साना बच्चाहरु को लागि सुविधाजनक छ जो समुद्र, मा एक कोमल प्रवेश छन्। एक धेरै राम्रो-विकास पूर्वाधार ग्राहकहरु माग रुचि छैन, तर सभ्यता द्वारा Untouched छन् कि रोमान्टिक ठाउँ देख प्रसन्न हुनेछ।
धेरै काला सागर तट को शरद ऋतु मा nicer। गर्मी को Subtropical अब्खाजिया छोड्न हतारमा जस्तो छैन। यो आत्म-घोषणा गणतन्त्र प्राप्त गर्न, आधा एक घण्टा सीमा पार गर्न पर्याप्त छ बिताउँछन्। सफा न्यानो समुद्र, सस्तो कोठा र बोर्ड, अचम्मको प्रार्य गठन भोजन Pitsunda र सुखुमी मा हलिडे पर्खिरहेका छन्। तर जहाँ छुट्टी मा सेप्टेम्बर मा यस क्षेत्रमा रूस मा जाने? Gelendzhik, Taman, Anapa, सोची, मा एडलर, Tuapse। प्रारम्भिक शरद ऋतु हावा मा समुद्र मा पानी न्यानो हुन्छ। त्यहाँ छन् को पाठ्यक्रम, सुन्दर दिन, तर सामान्यतया तपाईं सन्तुष्ट हुनेछ छोड्नुहोस्।
रूसी संघ मा न्यानो पानी को सूची कालो र Azov समुद्र गर्न सीमित छैन भनेर नबिर्सनुहोस्। कुनै कम गर्मी र देश को पूर्वी सरहद मा। तपाईं साइबेरियन छन् भने, वा तपाईँ लामो सडक, रूस मा सेप्टेम्बर मा आराम गर्न कहाँ अर्को ठाउँ डराएका छैनन्, सुदूर पूर्व बन्न सक्छ। Primorye मा, कुनाशिर को द्वीप, ज्वालामुखी Mendeleev मखमल सिजन को खुट्टा मा पनि, आउँछ। सखलिन मा अक्टोबर को शुरुवात एकदम पौडी खेल्न र Kitosii नदी र थप दक्षिण देखि Nevelsk जिल्ला मा sunbathe गर्न सहज नभएसम्म।
तपाईं समुद्र मा fixated छन् भने, रूस मा सेप्टेम्बर मा छुट्टी मा कहाँ जाने को प्रश्न मा, तपाईं फरक प्रस्ताव धेरै प्राप्त गर्न सक्छन्। को गर्मी गर्मी subsides गर्दा तरिका पर्यटकहरु देश को सबै प्रमुख सांस्कृतिक र ऐतिहासिक साइटहरु भीडलाई देखि गायब। यो घडी संग्रहालय मा लाइन मा खडा बिना सबै ठाँउहरु, को प्रयास र चुपचाप छैनन् हेर्न राजधानी वा सेन्ट पीटर्सबर्ग जान समय। रूस सुनको रिङ कलिनिन्ग्राद क्षेत्र यात्राहरु प्रेमीहरूलाई प्रसन्न हुनेछ। Altai, Seliger, Pidan, Shamora, Karelia खेल पर्यटन को प्रशंसक चकित हुनेछ।
भारत: फोटो, प्रकृति र आकर्षण
सुरक्षित बूट: कसरी सुविधा अक्षम
Helminths - लक्षण। विश्लेषण helminths। छोराछोरीको कीडे - लक्षण
स्मार्टफोन एलजी G4: निर्दिष्टीकरण, वर्णन, समीक्षाहरू
पोस्ट मा भन्ने हो?